Gareth Bale oo iska diiday heshiis uu mushaar qaali ah ku qaadan lahaa oo kaga yimid dalka Shiinaha… (Muxuu damacsan yahay?) – Gool FM
(Madrid) 10 Luulyo 2019. Xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Real Madrid ee Gareth Bale ayaa iska diiday inuu xagaagan u dhaqaaqo horyaalka dalka Shiinaha ee Chinese Super League, sida wararku ay sheegayaan.
Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa u caddeeyey mustaqbalka xiddigan reer Walesh, isagoo u sheegay inuusan qorshihiisa ku jirin xilli ciyaareedyada soo socda.
Si kastaba ha ahaatee, 29-sano jirkaan ayaa saddex sanadood uu kaga harsan yahay heshiiskiisa uu ku joogo garoonka Bernabeu, balse Jariiradda Marca ee dalka Spain ka soo baxda ayaa warinaysa in kaliya uu xiddigan ku bixi karo inuu aado mid ka mid ah kooxda ugu waa weyn qaaradda Yurub.
Bale ayaa 100 milyan oo gini mushahar ahaan u qaadan kara haddii uu go’aansado inuu sii joogayo islamarkaana uu arko inta uu ka dhammaanayo qandaraaskiisa saddexda sano ee u harsan kaasoo uu haatan ku qaadanayo 600 oo kun oo gini isbuucii.
Xiddiga xulka qaranka Wales ayaa la soo sheegayaa inuu iska diiday heshiis uu mushaar ahaan todobaadkii ku qaadan lahaa 1.2 milyan oo gini haddii uu u dhaqaaqi lahaa dalka Shiinaha oo uu ka ciyaari lahaa horyaalka dalkaasi ee Chinese Super League.
Kooxda Man United oo qarka u saaran inay 85 milyan oo gini kula soo wareegto saxiixeedii saddexaad ee xagaaga